Shandisa zvizere pocket spring foam mattress kuti uwedzere bhizinesi rako | Rayson
Shandisa zvizere pocket spring foam mattress kuti uwedzere bhizinesi rako
Iyo plug ine musoro wefurati, mraba musoro kana socket; Kubatana kwakarukwa kune imwe mugumo kuchengetedza musanganiswa weHex nzungu uye mhete dzemhete. Izvi zvakaiswa pamanamatiro ekutenderera mukati memuviri unochengeta plug yakasimba. Ivo vakagadzirwa nendarira, Bronze, Galvanizedironblack's skremarly inoshandiswa segasi chiteshi.
Muzhizha, kupisa kwakanyanya kwechivako kunopinda pasi kuburikidza nehurongwa hwekutonhora, uye munguva yechando, kupisa kunodzingwa kubva pasi. Maererano neDhipatimendi reUS reWesimba, iyo yakajairika mutengo wehurongwa hwakadaro ndeye madhora zviuru zvinomwe nemazana mashanu. Energy Deadment Research Runoratidza kuti maererano nemagetsi ekuchengetedza, investment inogona kazhinji kuwanikwa mukati memakore maviri kusvika gumi.
Apple \_ 'S Zvimwe zvishandiso, pamwe nemari yemari uye zvinokurudzira zvekutenga masevhisi akadai sekunyorwa kweApp Paunenge uchikura mumusika weSmartphone wakanonoka, kuwedzera mitengo kwakabatsira Apple kuwedzera uye kuwedzera chikamu chavo chemusika. Chiitiko cheChitatu \_ "Chiitiko chiri kuuya uye nyika dzakabatana dzichamisa mutero pane zvigadzirwa kubva kuChinas.